Raw JW 642 (1416133-89-5) ndị na-enye ọrụ hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / JW 642 (1416133-89-5)
SKU: 1416133-89-5. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke JW 642 (1416133-89-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
JW 642 isi agwa
JW 642 okirikiri
JW 642 (1416133-89-5) ojiji
Na laabu usoro, maka ogologo oge nchekwa, anyị na-atụ aro na JW 642be echekwara assupplied na -20 ℃. Ọ ghaghị ịdịgide ma ọ dịkarịa ala otu afọ.
E nyere JW 642 dị ka ngwọta na methyl acetate. Iji gbanwee ihe mgbaze ahụ, kpochasịa methyl acetate n'okpuru mmiri dị nro nke nitrogen ma gbanwee ihe mgbaze nke nhọrọ. A na-eji ihe na-emepụta ihe ndị dị ka asethanol, DMSO, na dimethyl formamide nwere ike iji ya. Ntụkwasị obi nke JW 642 n'ime ihe mgbaze ndị a dịka 13,5, na 11mg / ml, n'otu n'otu.
JW 642 na-agbanye soluble na ngwa ngwa. Maka ihe kachasị emetụ n'ahụ na mmiri ọgwụ, a ga-eme ka ngwongwo ethanolic nke JW 642should kpoo ya na akwa ocho. JW 642 nwere ihe nkwado nke 0.3 mg / ml na 1: ngwanrọ 2 nke ethanol: PBS (pH 7.2) iji usoro a. Anyị anaghị akwado ịchekwa ihe ngwọta ahụ maka ihe karịrị otu ụbọchị.
Kedu ụdị usoro JW 642?
DMSO ka 100 mM
Ethanol ka 100 mM
Ndụmọdụ siri ike na Solubility: Ụfọdụ ngwọta nwere ike isi ike ịnweta ma nwee ike ịmalite ịmalite site n'ịgbalite edemede, sonication ma ọ bụ ịdị ọkụ dị ọkụ (na batrị mmiri nke 45-60 ° C). Enwere ike ịkọwa ozi banyere nkwụsi ike nke ngwaahịa, karịsịa na ngwọta, na n'ọtụtụ ọnọdụ, anyị nwere ike inye gị nduzi zuru oke. Nkwado ndị anyị na-atụ aro bụ: SOLIDS: Ọ bụrụ na a kwadoro nchekwa dị na nkwupụta ngwaahịa ahụ, a ga-echekwa akwa ahụ, a ga-echekwa ngwaahịa ahụ ruo ọnwa 6 site na ụbọchị ị nwetara ya. IHE NDỊ BAỊBỤTỤ: Anyị na-akwado na echekwara ihe ngwọta ngwaahịa, ozugbo a kwadebere ya, na-etinye ya na akara ngosi -20 Celsius C ma ọ bụ n'okpuru ma jiri ya na 1 ọnwa.Ọ bụrụ na a ga-edozi ngwọta ọ bụla ma jiri ya n'otu ụbọchị ahụ.
Kedu otu JW 642 si arụ ọrụ
JW 642 bụ monoacylglycerol lipase (MAGL) nke nwere ike ma họrọ (IC = 3.7 nM). Na-egosiputa> 1000-fold selectivity for MAGL over fatty acid amidehydrolase (IC = 20.6 μM). Monoacylglycerol lipase (MAGL) ga - enweta hydrone nke dị na 2-AG ka ọ bụrụ arachidonic acid na glycerol, si otú a kwụsị ọrụ ya. A pụrụ imepụta ntụgharị ntụgharị dị ka n'okpuru: Methyl Acetate - Data ntanetị: Oral LD50 (oke):> 5,000 mg / kg; Oral LD50 (oke bekee): 3,705 mg / kg; LD50 Skin (oke bekee):> 5,000 mg / kg; TCLO Inhalation (mmadụ): 15,000 mg / m3; Methyl Acetate - Data Iwe: Skin (oke bekee): 500 mg (24h) dị nwayọọ; Anya (oke bekee): 100 mg (24h) agafeghị oke.
JW 642 (1416133-89-5) Ịdọ aka ná ntị
Izuzu na mmeghachi omume
Akwa n'okpuru aro ma ọ bụ ọnọdụ nchekwa.
5.2 Chemical kwụsiri ike
Stable n'okpuru ọnọdụ nchekwa nchekwa.
5.3 Nwee mmeghachi omume dị ize ndụ
Mmeghachi omume egwu agaghị eme na njem ma ọ bụ ọnọdụ nchekwa. Mwepu nwere ike ime na ikpughe ọnọdụ ma ọ bụ ihe ndị edepụtara n'okpuru ebe a.
5.4 Ọnọdụ iji zere okpomọkụ, mmiri.
Ihe 5.5 Ngwa na-enweghị ike
Acids siri ike / alkalis, ike oxidizing / mbenata mmadụ.
5.6 Ihe na-emebi emebi nke ngwaahịa
Na combustion nwere ike iwepụ mmiri na-egbu egbu. Enweghi ozi ajuju mara.
II.Handing na nchekwa
Ntuziaka 5.1 maka njikwa nchekwa
Jiri na-ekpuchi ọkụ na-ekpuchi ọkụ, na ikuku na-enye site na ụlọrụ aka. Zere ikpochapu, kọntaktị na anya, akpụkpọ anụ
uwe. Zere ikuku ájá na mmiri. Jiri na mpaghara nke ọma. Gbalịa ka ị ghara ịmalite ikpo ọkụ. Zere
ogologo oge ma ọ bụ ugboro ugboro.
5.2 Ọnọdụ maka nchekwa nchekwa, gụnyere enweghị nkwenye.
Na-echekwa ebe dị mma, nke ọma. Na-ezere ìhè anyanwụ kpọmkwem. Debe ihe eji akpachi anya na njikere.
Nchekwa nchekwa echekwara: Chekwaa na -20 Celsius C
5.3 Njedebe a kapịrị ọnụ
Jiri na-eme ụlọ na-arụ ọrụ na-emepụta ebe ọ bụla o kwere omume.
JW 642 (1416133-89-5) Ntụ ntụ
Ngwuputa JW 642 (1416133-89-5) Marketing
JW 642 enwere mmetụta ọ bụla
Ihe nwere ike ime ka ihe mgbochi mucous na akwara respiratory elu pụta; O nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ site na nsị, ingestion, ma ọ bụ nsị anụ; Nwere ike mee ka ụra na-eru ụra; Nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ ma ọ bụ respiratory system mgbasasị. Igwegharị ugboro ugboro nwere ike ime ka akpọrọ akpụkpọ anụ ma ọ bụ ọkpụkpụ.
Njikwa ihe ngosi / nchedo onwe onye
Ogwe njikwa 9.1 Control
Ndị na-arụ ọrụ na njikwa akara ọrụ
Enweghi ihe ọ bụla nwere ụkpụrụ njedebe na-ahụ maka ọrụ.
Njikwa ihe ngosi 9.2
Njikwa njikwa ihe kwesịrị ekwesị
Jiri ya na ebe a na-ekpuchi ya. Gbaa mbọ hụ na usoro iheomume niile akọwapụtara n'okpuru ngalaba 7 nke SDS nọ n'ọnọdụ.
Gbaa mbọ hụ na a ga-eji ụlọ ịsa ahụ na-asacha ụlọ.
Ngwa nchedo onwe onye
Nche ihu / ihu
Jiri iko nchedo kwesịrị ekwesị.
Jiri ọgwụ ndị na-eguzogide ọgwụ ndị kwesịrị ekwesị (nke kachasị mkpa chọrọ BS EN 374: 2003). Ebube kwesịrị
nyochaa tupu eji. Na-asa na aka akacha mgbe o jisiri.
Nchebe iku ume
Ọ bụrụ na ntule ihe ize ndụ dị mkpa, jiri respirator kwesịrị ekwesị.
n'etiti ndị ọzọ
Esi zụta JW 642 ntụ ntụ (1416133-89-5) site na AASraw